Mamerina Ny Fotoana Any Amin’ny Taona Sivifolo Nikohizana Ve i Torkia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Septambra 2015 3:00 GMT
Ny 19 Aogositra 2015. Ireo vehivavy manao hetsi-panoherana tao Istanbul, Torkia, mihiaka teny faneva sady mitazona takelaka mandritra ny hetsika manohitra ny ady. Nanao fifamoriana manohitra ny ady tao afovoan'i Istanbul ireo mpanao hetsi-panoherana. Hetsi-panoherana natao tamin'ny andro nisian'ny lehilahy mitam-basy nitifitra polisy teo ivelan'ny Lapan'i Istanbul, ary baomba tany atsimo atsinanan'ny firenena, izay noeritreretina ho nahafaty miaramila miisa valo. Sary Demotix avy tamin'i Avni Kantan. ID: 8349345.
Amin'ny maha-olona teraka tamin'ny fotoana izay nipoahan'ny fifandirana voalohany teo amin'ny Antokon'ny Mpiasan'i Kurdistan (PKK) sy ny miaramila Tiorka ahy, nahita maso ny fahafatesana sy ireo fanafihana isan'andro tamin'ny fahitalavitra sy ireo gazety an-tsoratra aho nandritra ny fahazazako.
Lasa nifankahafantatra akaiky tamin'ny alahelon'ilay fifandirana ny fianakaviako rehefa nisy namono ny havako miaramila, 20 taona lasa izay, tany amin'ny tanàna andrefann'i Mus — mbola marihana ho faritra ‘mampidi-doza’ hatramin'izao.
Hatry ny fifidianana solombavambahoaka ny 7 Jona, niditra tao anatin'ny herisetra miverimberina i Torkia, izay akon'ny fifandrirana niseho ny taona 80 sy 90.
Nampiasa renivola ara-politika goavana ihany ny governemantan'ny Antoko Rariny sy Fampandrosoana (AKP), tamin'ny fizotry ny fampihavanana miaraka amin'ny PKK, mba hamahàna ny olan'i Kiorda: nitsahatra taorian'ny fampitsaharana ny fifampitifirana ny taona 2013 ny fahafihana nisy teo amin'ny PKK sy ny miaramila Tiorka.
Nandritra ny famoriana olona ny Newroz (Taom-baovaon'ny Kiorda) ny volana Martsa 2013 tany Diyarbakir, niantso ireo hery mitam-basy an'i PKK, i Abdullah Öcalan, filohan'ny hetsika PKK, mba hisintaka ny sisintany Tiorka, tamin'ny alalan'ny taratasy nalefany avy tany am-ponja.
Mety ilay fizotry ny fampihavanana no zavatra lehibe indrindra vita tamin'ny fitondran'ny antoko AKP izay nitondra irery teo hatry ny taona 2002.
Io no fototra ho an'ny fitoniana ara-politika sy ny fampiasam-bolan'ny vahiny. Nihanatanjaka hatrany ny toekarena, niseho tamin'ny fahatsaran'ny sandam-bola livre Tiorka izany, ary ny fiahiana ara-tsosialy manakaiky ny an'ny Eorôpeana.
Indrisy, nosomparan'ny Filoham-pirenena Tiorka ankehitriny, Recep Tayyip Erdogan, ny hany zava-bitany lehibe indrindra, tamin'ny fanandratana ho any sy ny taorian'ny Fifidianana Solombavambahoaka ny taona 2015.
Nanampy azy hampitahotra ireo mpanohana tao anatin'ny vahoaka Kiorda ny fitomboan'ny fanaovany jadona.
Na noferan'ny lalàmpanorenana tsy hitanila aza ny toerany maha-filoha azy, nampiasaina ihany io mba hampitomboana ny fanohanany ny AKP.
Fanampin'izany, nilaza izao izy tamin'ny Martsa “tsy mitsahatra ny miresaka ny olan'i Kiorda izy ireo. Inona izany resahanareo izany, ry rahalahy? Olan'i Kiorda inona?”
Nanao ireo fanehoankevitra ho “fanintonana mialoha ny fifidianana”, i Selahattin Demirtas, filohan'ny Antoko Demokraty (HDP) an'ny havia, mpomba ny Kiorda.
HDP, teo ankilany, niverina niharan'ireo tifitra niverimberina avy tamin'ireo olo-malaza zokiny ao amin'ny AKP raha toa ka nitombo kosa ny fanohanana ny sehatra ara-politikan-dry zareo. Nitaraina ny Praiministra lefitra Yalçin Akdogan, izay nandray ny HDP sahala amin'ny mpiara-miombona antoka tamin'ny fifanarahana an-databatra, fa lasa rahona ho an'ny fizotran'ny fampihavanana nilamina tsara izay nandraisan'ireo antoko roa anjara ny fitomboan'ny lazàn-dry zareo.
Na teo aza ireo fanafihana maherin'ny 100 natao an'ireo famoriana olon'ny HDP na ireo birao, nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana, vitan'ilay antoko ny namaky ilay taha ambany indrindra takiana, izany hoe 10%, afaka ahazoana toerana ao amin'ny antenimiera.
Niafara tamin'ny firodanan'ny AKP maro an'isa tao amin'ny antenimiera izany, izay nanimba ny drafitr'i Erdogan saika hanova ny lalampanorenana Tiorka ho amin'ny fomba fiasa mifototra bebe kokoa amin'ny rafitra governemanta fehezin'ny filoha, amin'ny alalan'ny fanjakan'ny maro an'isa indrindra, izay tena nampiahiahy be ihany.
Manomboka rava tsikelikely ny zavatra rehetra
Araka ny novinavinain'i Akdogan, tsy ela dia niparitaka ilay dingana ho fampihavanana.
Ny fanafihana fanapoahana baomba tao Suruç ny 20 Jolay no zavatra ratsy nitranga voalohany. Nisy ifandraisany tamin'ny ISIS ilay fanapoahana baomba ary namono olona niisa 34, nandratra olona maherin'ny 100.
Nikendry ireo mpikambana ao amin'ny vondrona tanora sosialista izay tao Suruç ilay fanafihana, izy ireo izay nanomana ny fanarenana an'i Kobani, ilay tanàna be mponina Kiorda any amin'ny sisintany Syriana izay nataon'i ISIS fahirano.
Roa andro taorian'ilay fanafihana, nisy polisy lehilahy roa hita maty tao an-tranon'izy ireo tany Ceylanpinar, tanàna iray any amin'ny sisintany Syriana.
Ny andro nanaraka io, nisy polisy hafa indray maty tamin'ny fanafihan'ny PKK tany Diyarbakir, tamin'ny andro nitifiran'ny ISIS ireo miaramila mitam-basin'i Tiorkia tany Kilis, avy teny ampitan'ny sisintany Syriana, ka namono miaramila iray.
Nahatonga ny fanapahan-kevitry ny governemanta ny hanomboka hetsika miaramila lehibe, tsy hoe manohitra ny ISIS fotsiny fa ny PKK ihany koa, ireo fanafihana mamono olona izay niseho tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinanan'i Torkia ny faran'ny volana Jolay.
Nilaza ny PM Davutoglu fa “tsy mandeha irery ireo zavatra miseho ankehitriny fa ampahany anaty dingana iray mihitsy.”
Kanefa, hatreto ny ankamaroan'ireo hetsiky nataon'ny miaramila Tiorka no nikendry ireo toby miaramila mifandray amin'ny PKK any Iraka.
Isanandro ireo masoivoho eny an-toerana, nitatitra fifandonana miaraka amin'ireo Kiorda mpiady anaty akàta sy ireo vaovaon'ireo miaramila lasa maritiora, ireo fanafihana ataon'ny PKK amin'ireo tobin'ny polisy ary ireo hetsika atao entina manohitra ireo tobin'ny PKK any Kandil.
Tao anelanelan'ny 20 Jolay sy ny 20 Aogositra, olona miisa 140 no maty tao Torkia, indrindra tany amin'ireo tanàna be mponina Kiorda. Tao anatin'ireo namoy ny ainy, olon-tsotra ny 55, mpiady Kiorda ny 32 ary miramila na polisy ny 53.
19 Aogositra 2015 nofefen'ny polisy tady tsy ho afaka hidirana ny Lapa malazan'i Dolmabahçe ao Istanbul, trano misy ny biraon'ny praiminisitra ao Istanbul, taorian'ny fifampitifirana nifanaovana tamin'ireo lehilahy nitam-basy roa, ninoana ho voasambotra tany amin'ny Làlana Taksim avy eo. Sary Demotix avy tamin'i Avni Kantan. ID: 8347856.
Raha nampahatsiahy ny taona 90 ireo fanafihana, nisy fiovàna ny fiarahamonina Tiorka. Nandritra izay roapolo taona lasa izay, samy tonga saina ny Kiorda sy ny Tiorka hoe samy te-hiara-hiaina am-pilaminana izy ireo, ary hamaha ny olana amin'ny alalan'ny fifampiresahana.
‘Tokony mandeha sy miady izy samy izy any ireo’
Tsy raharahain'ireo mpanao politika miady seza sy fahefana ilay fiverenan'ny herisetra indray, izay mahatonga ireo vahoaka mahatsiaro ny filàny sy mitaky ny fandriampahalemana.
Miha-mitombo ny fihetsika te-hitroatra, tamin'ny fotoana fandevenana ireo maritiora.
Iray tamin'ireo miaramila Tiorka miisa valo maty tamin'ny fidarohana baomba nataon'ny PKK tao amin'ny tanànan'i Siirt i Recep Beycur. Avy amin'ny fianakaviana Kiorda izy, sahala amin'ilay namany Mehmet Halil Barkin izay maty tamin'ilay fanafihana ihany koa.
Tamin'ny fandevenana azy, niampanga an'i Erdogan ho tomponandraikitra tamin'ny fahafatesany ny iray amin'ireo havany.
Nilaza izao i Ömer Bilir: “Nandefa ny rahalahiko aho ary ho valin'izany vatàna mangatsiako no azoko. Aleo ho fantatry ny Filoha tsara. Mety ho azony an-tsaina ve hoe toy ny ahoana ny fijaliako mandra-pahatonga tamin'izao taona izao? Natao izay hiadian'ny samy mpirahalahy. Enga anie ho tezitra mafy aminy Andriamanitra, ho tratran'ny loza toy izao koa anie ny zanany lahy. Raha ny zanany io, ho toy izao ve no nitranga? Aleo tsy hankasitraka izany Andriamanitra.”
Tsy namela ny saina Tiorka apetraka tamin'ny tanàna rehetra na amin'ny fandevenana miaramila vao hatao ny fianakavian'ilay miaramila.
Maty tamin'ny fanafihan'ny PKK ny tobin'ny polisy tany Sirnak ny Kapiteny Ali Alkan. Nitazona ny vatam-paty ny rahalahin'i Alkan, ny Lietnà Kolonely Mehmet Alkan, sady niantso ny anaran'ny rahalahiny: “Ali’m. Iza no mpamono azy? Iza no anton'izao? Inona no mitranga amin'ireo miresaka ny vahaolana hatry ny omaly ary milaza ny ady hatramin'ny farany androany? Tokony mandeha sy miady izy samy izy any ireo.
Kanefa, raha tokony mitady vahaolana, vao maika nanamafy ny afon'ny firaiketana amin'ny tanindrazana ireo mpanao politika toa an'i Taner Yildiz, Minisitry ny Angovo.
Nilaza vao haingana i Yildiz hoe te-ho lasa maritiora izy raha sitrak'Andriamanitra — zavatra tsy ho tonga mihitsy ho an'ny olona mandeha amin'ny fiara tsy laitram-bala ary manana mpiambina maro manaraka azy isaky ny fotoana rehetra.
Nilaza ihany koa ny Praiminisitra Davutoglu fa vonona ny ho faty, nandritra ny “Hetsika Olon-tsotra miady amin'ny Fampihorohoroana”, fivoriana nokarakarain'ireo sendikà: “Manantena aho fa tsy hety hametraka fepetra ho an'ity firenena ity hanaovana sorona ny maritiora indray Andriamanitra. Kanefa fantatsika fa vonona [isika] ny hanome ny tenantsika sy ny zanantsika lahy ho maritiora ho an'ity firenena ity, ho an'ny firaisankinam-pirenena, ho an'ny fandriampahaleman'ity firenena ity… Tokony ho fantatry ny tany tontolo izany fanolorantena izany.”
Ankehitriny, lasa mikisaka any amin'ny resaka ara-politika sy ara-toekarena ary mankany amin'ny ivony mihitsy ilay fifandirana.
Ny 19 Aogositra, nandalo teo amin'ny Lapa Dolmabahce aho mba handeha ho any Taksim, vao antsasak'adiny talohan'ny nanafihan'ny mpikambana roa avy amin'ny vondrona DHKP-C ny lapa, izay nikendry tamin'ny grenady sy basy ny polisy mpiambina izay nitsangana teo.
Satria nitsangana tao anatin'ny efitra tsy laitram-bala fitoeran'ny mpiambina ireo polisy, tsy nisy ny maty.
Nisahotaka ireo olona noho ny angidimby nieloelo teny amin'ny Làlana Istiklal, ilay làlana malaza indrindra sy be olona indrindra ao Istanbul, satria efa niharana fanafihana baomba ihany koa taloha tao Taksim faritry Istanbul.
Niditra tao amin'ny Twitter aho mba hijery izay niseho ary nahita ny vaovao mikasika ilay fanafihana tao Dolmabahce. Nahatsapa tena ho tsara vintana aho — tafasaraka 30 minitra monja tamin'ilay fifampitifirana sy fanapoahana grenady — kanefa natahotra ihany koa satria mety hiseho na aiza na aiza ny fanafihana toy izany.
Niezaka ny nitandrina hatrany aho ary tsy nandeha tamin'ireo toerana feno olona sahala amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany, nandritra iny volana lasa iny, kanefa misy olona an-tapitrisany miaina ao Istanbul ary tsy ho afaka ny hiala amin'ny fanaony amin'ny andavanandrom-piainany daholo izy ireo.
Fotoanan'ny fifidianana, indray
Taorian'ireo fifidianana ny volana Jiona, tokony nanangana ny governemanta iraisana i Davutoglu, amin'ny maha-filohan'ny antoko ara-politika lehibe indrindra eto amin'ny firenena, kanefa nisafidy ny hanohy ireo tetikadiny ny AKP mba hisian'ny fifidianana mialoha izay antenainy hahazoany indray ny fahamaroany an'isa ao amin'ny antenimiera.
Tanteraka amin'ny ampahany ny zavatra nilainy taorian'ny tsy fahombiazan'ny fifampiresahana momba ny fiaraha-mitantana, ary niantsoan'ny Filoha Erdogan tamin'ny 25 Aogositra ny hisian'ny fifidianana mialoha ny fotoana izay hatao ny 1 Novambra.
Mety vao mainka hanampy ny drafitry ny AKP ny olan'ny fandriampahalemana misy ankehitriny, ary hamela azy ireo hanintona ny safidin'ireo mpandala ny fitiavan-tanindrazana, na dia kely ihany aza ny finoana hoe mety mbola hahazo fanohanana ampy tsara izy ireo ahafahan'i Erdogan mametraka ilay fanovàna lalampanorenana izay imatimatesany fatratra.
Miaraka amin'izany, hiteraka tsy fahamarinan-toerana ara-politika ny vola nampiasaina tamin'ny fandaniana ara-miaramila raha toa ka tokony nankany amin'ny fampiasam-bola tamin'ny fiarovana ara-tsosialy.
Tsy vitako saintsainina mihitsy hoe mety hahatsapa tena ho diso amin'ny toe-draharaha mafana sy ireo fahafatesana teto an-toerana sy ny manodidina ny iray amin'ireo mpanao politika tomponandraikitr'izao korontana sy fahasimbàna izao.
Nanampy tamin'ny famoahana ny lahatsoratra i John Lubbock .